Vavaka ho an'i Masindahy Ignatius any Loyola. ? Handroaka ny olona sy ny fahavalo
Vavaka ho an'i Saint Ignatius any Loyola Tena mahery izy io hatramin'ny niakarany teto ambonin'ity tany ity no hino azy sy hanampy ny hafa foana.
Izany no nahatonga azy nahavita zavatra lehibe ankoatry ny maha-mpino mafy ny tenin'Andriamanitra ary nanao ny foto-pinoana kristiana. Io finoana matanjaka io izay nanana hatrany izay nanampy azy mandra-pofona faran'ny farany hanao ny sitrapon'ny Tompo.
Ankehitriny izy dia olo-masina voamarina sy nomen'ny vondron'olona Katolika noho ny fahagagana lehibe nomeny na dia rehefa nandao an'ity tany ity aza izy.
Mpanompon'ilay tenin'andriamanitra mamorona izay lasa mpinamana antsika ankehitriny hanampy antsika amin'ny toe-javatra ratsy.
Na inona na inona ilaintsika andalovantsika, azo antoka fa i San Ignacio de Loyola dia manana fanampiana eo an-tanany mba hanome izany ho antsika.
1 Vavak'i Saint Ignatius an'i Loyola Iza io?
1.1 Vavak'i Masindahy Ignatius any Loyola hitazonana ny olona lavitra
1.2 Vavaka ho an'i Saint Ignatius any Loyola hanoherana ny fahavalo
1.3 Vavaky ny fiarovana
1.4 Miaro ny mpifanila trano
Vavak'i Saint Ignatius an'i Loyola Iza io?
Ny tantara dia milaza amintsika fa Ignacio de Loyola dia teraka tamin'ny 1491. Nanao asa miaramila toy ny fanaon'ny fianakaviany izy. Na izany aza, naratra ratra iray izy izay nanakana azy tsy hanohy ny fianarany ara-tafika ary tamin'io fomba io dia nanomboka nanjary mpino mahatoky ny finoana kristiana izy.
Nanomboka nanao fihemorana ara-panahy sasany ary nanapa-kevitra ny hanampy fanatanjahan-tena bebe kokoa amin'ny fampiofanana izy ary tamin'izay izy nanomboka notsikerain'ny hafa izay manaraka maodely fiofanana tokana. Taorian'ny dingana maro izay tsy maintsy nandalovany dia natombony tamin'ny Orinasa Jesosy izay ny zavamaniry izay miakatra miasa amin'ny zavatra rehetra anio el tontolo.
Maty tao Roma tamin'ny taona 1556 ary nahazo fankatoavana tamin'ny taona 1609 izy ary avy eo nampandehanana tamin'ny 1922. Nomena azy tamin'ny 31 Jolay izy mba hankalazana ny fahaterahany ary mahatsiaro manerana an'izao tontolo izao.
Vavak'i Masindahy Ignatius any Loyola hitazonana ny olona lavitra
Oh! Virjiny masina indrindra, reny be voninahitra sy any an-danitra, izay naka aingam-panahy tamin'ny Masindahy Ignatius of Loyola fahazavanao, hanaraka ny lalan'ny fanompoana maha-pretra, hanokana ny fiainany amin'ny fiainam-panahiny hanompo, ho toy ny asa sy ohatra ho an'ny zanak'olombelona. , Mangataka aminao aho, am-panetrentena, mamela ny hadisoako ary avelao aho, amin'ny fahafoizan-tena lehibe lazaiko aminao, fa i Saint Ignatius of Loyola dia miaro ahy, miaraka amin'ny ny hery finoana, manala amin'ny tontolo iainako ireo olona izay tsy te hitondra fahavoazana ho ahy fotsiny, mangataka aminao aho mba hotazominao hiala amiko izy ireo ary ampahafantaro azy ireo fa tsara kokoa ho azy ireo ny manao soa. Amena.
Raha te-hamindra ny olona handeha ianao, ity no vavaka marina nataon'i Saint Ignatius any Loyola.
Rehefa nandalo an'i San Ignacio de Loyola tamin'ny fanenjehana marobe noho ny finoany dia lasa tafavoaka velona izy.
Mahery, mpiady ary, mandraka androany, ohatra ny fahamasinana na dia misy aza ny toe-javatra maro. Izy dia afaka manampy antsika hitoetra ao anatin'ny toe-javatra sarotra.
Na iray aza, mba handroahana ny olona manelingelina, ny angovo ratsy, ny toe-javatra ratsy na ny zavatra rehetra mangalatra ny fiadanantsika.
Mila mino fotsiny ianao fa manana fahefana hisolo vava antsika eo alohan'ny rain'ny lanitra izy, hany ka manalavitra ny fiainantsika tanteraka ny toe-javatra na ny olona.
Vavaka ho an'i Saint Ignatius any Loyola hanoherana ny fahavalo
Ray Masina Masina Ignatius any Loyola, mpanorina ny Fikambanan'i Jesosy; voafidy tamin'ny olona an'arivony maro hanaparitaka ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny vazan-tany efatra; lehilahy malaza indrindra amin'ny karazana hatsaram-panahy ...
Fa indrindra amin'ny fahadiovan'ny fikasana izay irinao mandrakariva hahazo ny voninahitr'Andriamanitra lehibe kokoa; mahery fo miavaka amin'ny fibebahana, fanetren-tena ary fahamalinana; tsy mety reraka, tsy miova, be fandavan-tena indrindra, mahavariana indrindra; fiantrana tsara indrindra amin'Andriamanitra, manana finoana velona ary fanantenana matanjaka indrindra ...
Faly aho, ry Dada malalako, mahita anao manankarena be sy be voninahitra be, ary mangataka anao aho mba hahatongavanao amin'ireo zanakao ny fanahy izay nampahery anao, ary amiko, manana tanjona mahitsy toy izany, na dia ny kely indrindra dia mikatsaka ny voninahitra masina fotsiny aho. ho fanahafana anao, ary noho izany dia nahomby tamin'ny maha-mpiara-miasa aminao ny voninahitra aho.
Mivavaha amin'ny vavaka ataon'i Saint Ignatius any Loyola hanoherana ny fahavalo amim-pinoana lehibe.
Ny fahavalo dia hatramin'ny niandohan'ny famoronana ary i San Ignacio de Loyola dia nanana azy ary nivoaka ho mpandresy tamin'ny toe-javatra rehetra nandalovany, tsy nisy mora tamin'izy ireo.
Izany no antony anontaniako azy manokana amin'ny fehezanteny iray hamelezana ny fahavalo I Saint Ignatius any Loyola dia afaka manampy antsika hamaha ny toe-javatra maro izay sarotra ny handresy ny olombelona.
Ny vavaka mahery miaraka amin'ny finoana ary rehefa tsara ny tanjona ary mivoaka ny vavaka toy ny hiaka avy amin'ny fanahy sahirana dia tsy misy zavatra azo ampidirina amintsika.
Vavaky ny fiarovana
Voninahitra Saint Ignatius any Loyola, mpanorina ny Fikambanan'i Jesôsy sy mpisolovava manokana ary mpiaro ahy!
Satria avo dia avo any an-danitra ianao noho ny nanaovanao ny asanao ho voninahitr'Andriamanitra bebe kokoa, miady amin'ny fahavalon'ny fiangonana, miaro ny finoantsika masina, manitatra izany amin'ny alàlan'ny zanakao manerantany ...
Ampahalalao ahy ny maha-Andriamanitra azy, noho ny fahamendrehan'i Jesoa Kristy tsy manam-petra, sy ny fanelanelanan'i Neny be voninahitra, ny famelana tanteraka ny fahotako, ny fanampiana mahasoa an'Andriamanitra sy ny manompo azy amin'ny ezaka rehetra manomboka izao, ny fahatokiana sy maharitra amin'ny lalan'ny hatsarana. sy fifaliana noho ny fahafatesany amin'ny sakaizany sy ny fahasoavany, ny mahita azy, tia azy, mankafy azy ary manome voninahitra azy amin'ny mpiara-miasa aminao mandritra ny taonjato maro.
Tianao ny fiarovan'i San Ignacio de Loyola amin'ny fiarovana?
Fantany ny fomba hitazomana sy hiarovana ny finoana sy ny zavatra inoany na dia amin'ny fotoan-tsarotra indrindra aza ary izany no mahatonga azy ho mpiaro ny fiangonana kristiana.
Izy dia afaka manangana ny vavaka ataontsika amin'ny mangataka fiarovana amin'ny fotoan-tsarotra na ho antsika na ho an'ny fianakaviantsika amin'ny ankapobeny.
Ireo toe-javatra rehetra izay mahatonga antsika tsy hanana ahiahy dia tokony avela eo anoloany, mba hanampiany antsika.
Miaro ny mpifanila trano
Saint Ignatius any Loyola, olo-mahatoky amin'ny finoana katolika, izay niaro azy tamin'ny fomba miolakolaka, avy amin'ny fivadiham-pinoana sy tamina fihatsarambelatsihy, fa ny Katolika dia natsangana, miangavy anao hiala lavitra ahy aho, satria nivily lalana ianao sy ireo mpianatr'i Jesôsy mahatoky. izay nanandratra ny faharatsian'izy ireo tamin'ny fiangonana, miangavy anao aho, esory amin'ny sisiko ny olona miaina amin'ny fiainana ratsy, esory ny mpifanolo-bodirindrina, esory ny fahavaloko amin'ny làlako, Saint Ignatius an'i Loyola, mpivavaka be an'i Jesosy Kristy, amin'ny hatsaram-ponao sy Fahasoavana averiko. Amen.
Raha te handroaka ny mpifanila trano, tsy maintsy milaza ny vavak'i Saint Ignatius any Loyola ianao.
Ny mpifanolobodirindrina, matetika, dia lasa fianakavianay satria amin'ny toe-javatra maro no akaiky indrindra ananay izy ireo.
Mety ho zavatra tsara izany, satria ny fananana olona akaiky anao dia tsy ho eo mihitsy, saingy rehefa mpifanila trano ratsy izy dia lasa sarotra ny zavatra rehetra. Ireo no olona lasa fahavalontsika ary manao izay tsy hahombiazantsika ny fiainantsika.
Mivavaha, ary izany no tokony ho fiarovana tokana ataontsika na dia ao anatin'ireo toe-javatra izay tsy haintsika tsara izay tokony hatao.
Saint Ignatius de Loyola azonao atao ve ny manampy anay manala ireo mpifanila trano ratsy fanahy ireo izay natao hanova ny fandriam-pahalemana eo amin'ny fiainantsika sy amin'ireo rehetra manodidina antsika.
Ny fitaomana ratsy izay mameno ny vondron'olona iray manontolo amin'ny angovo tsy tokony hataontsika alohan'ny handratran'izy ireo ny firindran'ny tontolo rehetra.
Tsy maintsy angataho izy ireo hihataka tsy misy fahavoazana, ka tsy manary ny fitaoman-dry zareo ary manala ny angovo ratsy rehetra, vavaka mahery izay hanampy antsika amin'ny fotoana rehetra.
Afaka atao ary ianao.
Mila mino ao am-ponao fotsiny ianao. Ny finoana handeha hampandeha ny asany rehetra.
Mila mino foana ny herin'i St. Ignatius amin'ny vavaka Loyola hialana amin'ny olona sy ny fahavalo isika.
Noho izany, azonao antoka fa hahazo fanampiana avy amin'Andriamanitra foana ianao.